House for Sale in South Okkalapa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in South Okkalapa
Ad Number S-7361387
တောင်ဥက္ကလာ ပါရမီလမ်းအနီး 1RC ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7361194
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဇီဇ၀ါဥယျာဉ်အိမ်ရာရှိ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းပါမည်။
9,600 Lakh (Kyats)
09264009696, 09264009797, 09264009898
Ad Number S-7361186
3,300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7361178
​​​ဝေဇန္တာယလမ်းမကြီးအနီး၊ 2BN ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7361167
သံသုမာလမ်းမကျောကပ်ရှိ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ (3RC) လုံးချင်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
3,900 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7360551
54 Real Estate Close
မေတ္တာလမ်းမပေါ်ရှိ 2RC ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7358762
Toe Tet Htun-တိုးတက်ထွန်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
ရတနာလမ်းမအနီး 2RC ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7358666
ဇေယျသီရီလမ်းသွယ် ၇ ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ် (20*60) 2RC. MR.3. Hall ဂရံ အမည်မပေါက် အရောင်း=900 သိန်း LL...
Ad Number S-7358310
တကောင်းလမ်းသွယ် ၅ ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ် (20*60) 1Bm. S.2 အရောင်း=900သိန်း LL...
Ad Number S-7358288